SARM Maka Uru A Na-enweta | Mee Mgbapụta ọ bụla
Lexlọ nyocha Reflex YK-11 Myostine 5mg 90 Capsules
Alfa Labs TLB-150 5mg 90 Capsules
Hit banyela n’elu ugwu na njem ahụike gị? Iwuli akwara anaghị adị mfe, na ị nwere ike ịnọ na ebe ọ na-enweghị oke etu protein ị na-eri ma ọ bụ ole ị na-eme. Ichoro mmezi site na ebe ozo. Nke a bụ kpọmkwem ụdị ọnọdụ ị kwesịrị ị na-ewere SARM maka uru uru! "Ndị na-eme mgbanwe na-anabata etrogen" (SARM maka obere) bụ capsules dị oke irè maka inweta ahụ ike.
Ọnọdụ Nchedo na Steroid
SARM na-arụ ọrụ yiri nke ndị steroid. Mana nsogbu ndị a na-akọ na-adị ala karịa. Ha na-ahọrọ ihe ndị nabatara ha. Ha ga - ejikọta naanị ndị na - anabata ahụ ike.
SARM maka Uru Akwara maka Alldị Mmadụ Niile
SARM gosipụtara na ọ dị irè na ịba ụba oke ahụ ike maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. SARM maka uru uru nwere ike ịbara gị uru! Lelee nkọwapụta ngwaahịa ọ bụla iji mụtakwuo banyere otu ụdị SARM anyị iche iche.
Ọtụtụ Uru nke SARM
Iji nyere gị aka inweta ahụ ike, SARM ga-eme ka ntachi obi gị, akwara ike gị, ike gị, na ogo gị. Na SARM anaghị enyere aka gị aka. Ha na-enyekwa ahụ ike dị mma nke na-eme ka ahụike gị dum dịkwuo mma. Ọ dịghị mkpa iji PCT kwụọ ụgwọ maka ọnwụ testosterone mgbe ị na-ewere SARM n'ihi na ngwaahịa anyị agaghị emebi ọnọdụ nke testosterone gị.
Ọbụlagodi na ịchọghị ihe maka asọmpi egwuregwu dị elu, ndị SARM nwere ike inyere gị aka inweta ahụ ike na ahụ gị niile. Nke a ga - eme ka mgbatị gị kwa ụbọchị dị mma, mee ka ị nwekwuo obi ike, ma melite ogo ndụ gị niile.
Gaghị echere ogologo oge iji malite ịhụ nsonaazụ ndị a dị ịtụnanya. SARM maka uru uru nwere ike nweta nsonaazụ gị na 4 ruo 16 izu! Mgbe otu izu iri na abụọ gachara, ndị SARM nwere ike inye gị ọtụtụ kilogram nke akwara iri. Egbula onwe gị na nkụda mmụọ mgbe SARM bụ azịza dị mfe, dị irè na ngwa ngwa. Ha dịkwa oke ọnụ karịa ihe mgbakwunye ahụike ndị ọzọ.
Kedu ihe ị na-eche? Ọ dịghị ihe ga-efunahụ gị na ihe ọ bụla ga-enweta — ọkachasị akwara! Lee anya na nhọrọ dị iche iche Sarms Stores na-enye maka SARMS maka uru uru ma chọta nke na-arụ ọrụ maka gị. Ọ bụrụ n’inweghi n’aka ebe ị ga - ebido, nye ụlọ ahịa Sarms oku! Ọ ga-amasị anyị ịza ajụjụ gị.